Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny fiarahamonina Afrikana Atsinanana dia mijaly amin'ny fizahan-tany goavambe sy fahaverezan'ny asa
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fiarahamonina Afrikana Atsinanana
Fikarohana vaovao momba ny fiantraikan'ny COVID-19 eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny dia manondro fahaverezan'ny asa any Afrika Atsinanana hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana tamin'ny taon-dasa.
2.1 tapitrisa ny asa very noho ny areti-mandringana COVID-19 ao amin'ny Community East Africa.
Ny fahaverezan'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny dia mitentina US $ 4.8 miliara.
Ny mpitsidika ny valan-javaboary dia nihena be sahabo ho 65 isan-jato, ary niteraka fiatraikany ratsy amin'ny fiarovana ny bibidia any amin'ny faritra.
Ny East Africa Business Council (EABC) dia nandefa tatitra manaitra iray izay mampiseho fahaverezan'ny asa 2.1 tapitrisa amin'ny fizahan-tany eo amin'ireo firenena 6 mpikambana ao amin'ny Community Africa East (EAC) amin'izao tontolo izao mankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Asa. Ny firenena mpikambana ao amin'ny EAC dia i Tanzania, Kenya, Oganda, Rwanda, Burundi, ary South Sudan.
Ny fandalinana nataon'ny EABC dia nitatitra fatiantoka 4.8 miliara dolara amerikana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny nateraky ny fiantraikan'ny valan'ny COVID-19, ny ankamaroany dia tamin'ny tsena loharanom-pizahan-tany any Eropa, Amerika Avaratra ary Azia atsimo atsinanana.
"Ity vanim-potoana ity dia nahamarika asa mitentina 2 tapitrisa eo ho eo, nanomboka tamin'ny asa 4.1 tapitrisa voarakitra tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny asa 2.2 tapitrisa tamin'ny faran'ny taona 2020," hoy ny fanadihadiana.